Backpack mureza & sign
sign & mureza
Yakasiyana neyedu classicBackpack SFH, tinofambisa mureza weBackpack mureza & kusaina mukati mezippered compartment uye tosiya kuseri kwepanera flat.
Bango remureza rakagadzirwa semusanganiswa unochinjika wesarudzo shanu dzemureza mune imwe system, bhegi rimwe chete uye mureza wakafanana unogona kuenderana ne5 yakakurumbira maumbirwo ( feather flag, teardrop flag uye rectangle mureza, arch mureza, paddle mureza)
Nzvimbo hombe kumusana, inobvumidza iwe kunamira poster pairi, saka zvese mureza uye posita hombe zvichange zvichikwezva maziso, zvinokubatsira kuti uongorore zvimwe zvingangoita bhizinesi.
Iine magiraidhi echinyakare emureza uye posita aunogona kushandura zviri nyore kubva pane chimwe chiitiko kuenda pane chinotevera, Backpack Mureza & siginecha ndechimwe chezvakanakisa zvinodhura zvekushandisa zvekufamba kusimudzirwa mukati kana kunze.
(1) Innovation mureza unokwira dhizaini.Yakatangwa kugadzirwa neWZRODS pasi rese
(2) Imwe bhegi uye danda seti sutu ye5 mureza maumbirwo, zviri nyore kushandura uye kudzora masheya ako kuti asangane nekukasira kurongeka kwevatengi, dzikisa yako hesiti uye nzvimbo yemasheya.
(4) Imba yakavharwa inopa imwe nzvimbo yekusunungura maoko ako.Homwe refu yakagadzirwa kunyanya kuchengetedza danda
(6) mesh side homwe / hoko dzemabhodhoro emvura
Item code Product Printing Size Kurema kurongedza saizi
BBXDNOA F/S/U Mureza 122*51CM 1.2KG 54*30.5*5.5CM
Chimiro 51 * 28CM
Tsvaga zvimwe zveduBackpack bannerkana zvimwemureza&display stand
Zvakapfuura: 2 mu1 mumba
Zvinotevera: Deluxe Backpack X-chimiro Banner